माछा र कुखुराको मासु राखिएको खोलमा कोरोनाभाइरसको अवशेष फेला परेपछि – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/माछा र कुखुराको मासु राखिएको खोलमा कोरोनाभाइरसको अवशेष फेला परेपछि
बीबीसी। हालै चीनमा विदेशबाट आयात गरी चिस्यानमा भण्डारण गरिएका झिँगे माछा र कुखुराको मासु राखिएको खोलमा कोरोनाभाइरसको अवशेष फेला परेको विवरण आयो। यसले खाद्यपदार्थ राख्न प्रयोग गरिने खोलबाट कोरोनाभाइरस सर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न फेरि उत्पन्न भएको छ।सम्भावना कति छ ?
रट्गर्ज यूनिभर्सिटीमा सूक्ष्मजीव विज्ञानका प्राध्यापक इम्यानुअल गोल्डम्यानले जुलाईको द ल्यान्सेटमा लेखेका छन्: “मेरो विचारमा निर्जीव सतहबाट सर्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। तर सङ्क्रमित व्यक्तिले कुनै ठाउँमा खोक्यो वा हाच्छिउँ गरेको छ र त्यहाँ अर्को कुनै व्यक्तिले दुई घण्टाभित्र छोयो भने सम्भावना रहन्छ।”भाइरस कसरी सर्न सक्छ?
‘पुर्खाको पालादेखि नै भो’ग’च’ल’न गरिरहेको जमिन कसरी सरकारले चीनको भन्न सक्छ ?’
ट्यांकर दु’र्घटना हुँदा २५ जनाको मृ’त्यु भएको छ । ट्यांकर ब्रे’क फेल भएर अन्य गाडीलाई ठक्कर दिँदा कम्तिमा २५ जनाको मृ’त्यु